Madaxweynaha Jabuuti oo sir badan ka sheegay Soomaaliya |
Madaxweynaha Jabuuti oo sir badan ka sheegay Soomaaliya
Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa si rasmi ah kaga hadlay waxyaabaha keena in mar walbaa ay isqabtaan madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo ra’iisul wasaarahiisa, taasoo marar badan ka dhacday dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Jabuuti, oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in qaladaad uu sheegay inuu ka jiro dastuurka uu sabab u yahay khilaafaadka soo kala dhex gala madaxda ugu sareyso dalka.
Ismaaciil Cumar, ayaa soo jeediyay in dib u eegis guud lagu sameeyo dastuurka KMG ee ka dhisan dalka Soomaaliya, si looga saaro khilaafaadka soo laalaabta ee dhexmara madaxda ugu sareyso dalka.
“Aniga waxaan aaminsanahay in Dastuurka uu qalad ka jiro, in mar la fariisto oo la isla eego meesha qaladka uu ka jiro, hogaanka mar waliba inuu liico oo khilaaf yimaado wadanka wax uma tareyso sharafta wadankana hoos ayeey u dhigeysaa”Ayuu yiri Madaxweyne Geelle.
Madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa dhanka kale arin wanaagsan ku tilmaamay in ciidamada AMISOM dhaqaalaha ku baxa haddii la siin lahaa ciidamada dowlada Soomaaliya ay noqon lahaayeen kuwo tayo wanaagsan leh.
“Aniga waxaan aaminsanahay waxa xoolo lagu bixinaayo Amisom, hadii rubuc kamid ah lasiin lahaa askarta Soomaaliyeed inay noqon lahaayeen kuwa wanaagsan oo tababar heer sare ah ayeey heli lahaayeen, laakiin iminka Askarta Soomaalida waa ay dhismayaan waa feker fiican”Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweynaha dalka Jabuuti.
Ciidamada Amisom ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa caalamka waxa ay ku bixiyaan qarashaad badan oo ku aadan howsha ay ka hayaan dalka Soomaaliya, iyadoo ciidamada Soomaalida aysan helin mushaar fiican iyo qalab wanaagsan intaba.